Shiinaha ayaa amray in la xiro qunsuliyada Mareykanka ee magaalada Chengdu ee Shiinaha… – Hagaag.com
Shiinaha ayaa amray in la xiro qunsuliyada Mareykanka ee magaalada Chengdu ee Shiinaha…
Posted on 24 Luulyo 2020 by Admin in World // 0 Comments
Wasaaradda arrimaha dibedda Shiinaha ayaa sheegtay inay subaxnimada maanta oo Jimca ah ku wargalisay safaaradda Mareykanka in la xiro qunsuliyadda ay ku leedahay magaalada Chengdu, ee koonfurta dalka, maalmo kadib markii Washington ay amartay in la xiro qunsuliyadda Shiinaha ee magaalada Houston.
Bayaanka ayaa lagu sheegay in Wasaaradda Arrimaha Dibadda Shiinaha ay ku wargelisay safaaradda Mareykanka ee magaalada Beijing in la kansalay ogolaashaha shaqada ee qunsuliyada guud ee Mareykanka ee Chengdu, isla markaana waxay dejisay shuruudo gaar ah oo lagu joojinayo dhammaan howlaha qunsuliyadda dhexdeeda.
Wasaaradda arrimaha dibedda ayaa waxay ku cadeysay bayaankeeda in xaalada hadda taagan ee u dhaxeysa Shiinaha iyo Mareykanka aysan aheyn wax ay Beijing rabto inay aragto, waxay ku eedeeysay xaalada sii xumaaneysa Washington.
Waxay sheegtay in Shiinuhu mar labaad ku boorinayo Maraykanka inay ka laabtaan go’aanka qaldan si ay u abuuraan daruufo dib loogu soo celiyo xiriirkii laba geesoodka ahaa sidiisa caadiga ahaa.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda Shiinaha ayaa hadal qoraal ah waxay ku muujisay in go’aankan uu ka dhigan yahay “mid sharci ah oo jawaab lagama maarmaan u ah ficillada aan sharciga ahayn ee Mareykanka.”
Wasaaradda arrimaha dibedda Shiinaha ma aysan siinin waqti kama dambeys ah oo lagu xiri karo howsha, halka maamulka madaxweyne Donald Trump uu qunsuliyadda Shiinaha ee Houston ku siiyay 72 saacadood si ay uga baxaan dibloomaasiyiinta Shiinaha dalka.
Safaarada Mareykanka ee Beijing ka sokow wuxuu Mareykanka leeyahay 5 qunsuliyad oo ku kala yaal magaalooyinka: Canton, Shanghai, Xinjiang, Chengdu, iyo Wuhan, iyo sidoo kale Hong Kong.
Qunsuliyadda Chengdu – oo la furay 1985 – waxay daboolaysaa dhammaan koonfur-galbeed Shiinaha, gaar ahaan Gobolka Tibet oo heysta is xukunka, howlgalka qunsuliyada ayaa ka shaqeeya 200 oo shaqaale ah, oo ay ku jiraan 150 shaqaale maxalli ah, sida lagu sheegay boggooda internetka.
Dhinaca kale Xoghayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo wuxuu sheegay in mas’uuliyiinta dalkiisa ay xireen qunsuliyadda Shiinaha ee magaalada Houston waayo waxay ahayd ubuqda basaasnimada iyo xatooyada hantida aqooneed, wuxuu kaloo ku eedeeyay Shiinaha inay ka dhigeyso marin biyoodka ugu waaweyn ee adduunka mid aan nabad u aheyn ganacsiga caalamiga ah.
Pompeo wuxuu intaas ku daray “Shiinaha ayaa boobay hantideena fikirka iyo sirteena ganacsiga ee qaaliga ah, taas oo keentay in malaayiin shaqooyin ah laga waayo guud ahaan Mareykanka.”